दोष लाउनुको पनि तरिका हुन्छ नी ! रबिलाई फसाउन गरिएको नाटक थियो भूत काण्ड ? (भिडियो) – Etajakhabar
ललितपुरको टिकाथलीको घरमा आएको समस्यालाई लिएर पछिल्लो समय बिभिन्न टिका टिप्पणी भएका छन् । रबि लामिछानेले कार्यक्रममार्फत उक्त घरमा भएको समस्याबारे बताएसंगै सर्वत्र रुपमा भूतको संज्ञा भयो । रबि लामिछानेले कार्यक्रममा भुत घर भनेका थिएनन् ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ २५, २०७४ समय: १२:२८:२४